के लाई लगाउनु कहिले पैदल यात्रा बाहिर - शेन्जेन यी फू लामो व्यापार विकास कं, लिमिटेड
के लाई लगाउनु कहिले पैदल यात्रा बाहिर
कम्फर्ट आउटडवेयरको पहिलो तत्व हो। सान्त्वना प्राप्त गर्न, तपाईंको शरीर सही तापक्रम र सुक्खा हुनु आवश्यक छ।
जब तापक्रम ११ र 35 35C बीचमा हुन्छ हाम्रो शरीरहरू एकदम सहज हुन्छन्। अधिक हाइकर्स लेयरिंग सिस्टम रुचाउँछन् किनकि यो हल्का, लचिलो र मर्मत गर्न सजिलो छ। तपाईं वर्षभरि यही पोशाक प्याक गर्न सक्नुहुन्छ र जाडो यात्राको लागि केवल थप तहहरू थप्न सक्नुहुन्छ। यदि यो धेरै तातो छ भने, कपडाको एक लेयर हटाउनुहोस् र यसलाई झोलामा प्याक गर्नुहोस्। यदि यो हावायुक्त छ भने, बाहिरी तहले पसिनाबाट जोगिन मद्दत गर्दछ। यो धेरै नै टि-शर्ट र टप्स बोक्नुभन्दा तपाईंको ब्याकप्याक स्पेस प्रयोग गर्ने अधिक कुशल तरीका हो। थर्मल अण्डरवियर चिसो मौसममा धेरै फेसनदार नहुन सक्छ, तर यो आरामदायक र न्यानो हुन्छ।
सामान्यतया, तपाईले ढीला-फिटिंग कपडा छनौट गर्नु पर्छ जसले बिरूवाको डings्गुर र लामखुट्टेको टोकाइ सम्हाल्न सक्छ। केहि ब्रान्डले कीरा रिपेलेन्टहरू बिना कपडा बेच्दछन्, जुन राम्रो विकल्प हुन सक्छ यदि तपाईं संवेदनशील र संक्रमणमा अतिसंवेदनशील हुनुहुन्छ भने। डिटेचेबल जिपर प्यान्टहरू पनि तपाईको ब्याकप्याकको तौल घटाउन व्यावहारिक विकल्प हुन्। यी प्यान्टहरू छनौट गर्दा, प्यान्टहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तल एक जिप्पर छ ताकि तपाईं तिनीहरूलाई जूता बाहिर नलिन सम्म लिन सक्नुहुनेछ। अन्तमा, टिक र लीचहरू जस्ता जीवहरू हल्का रंगका फार्महरूमा सजिलैसँग भेट्न सकिन्छ, र हल्का रंगको कपडा छनौटले कीराहरूलाई भगाउन सजिलो बनाउँदछ।
अंडरवियर को विकल्प
सबै जना सहमत छन् कि डर्मेटाइटिस, खुट्टामा छाला जस्ता, गम्भीर रूपमा लामो पदयात्रामा असर गर्न सक्छ। यद्यपि कसरी प्रभावकारी रूपमा यसलाई हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मतहरू विभाजित छन्। ब्यागी बक्सर शर्टका धेरै अनुयायीहरू छन्, र बक्सर सर्टहरू पनि मनपर्दछन् किनकी तिनीहरूको फ्लैट सिम र सर्टको अगाडि स्थानको कारण। यसको सट्टामा, लाइक्रा कपडाबाट बनेको कडा खेल शर्टहरू प्रयास गर्नुहोस्।
अण्डवियरले शरीरलाई चिप्लन सक्छ, स्वतन्त्र रूपमा पनि लुक्न सक्छ, आधार आरामदायक हुनु पर्छ
तह प्रणाली द्वारा तह
वास्तवमा, लुगाले न्यानो महसुस गर्दैन। तिनीहरूको उद्देश्य शरीरबाट तातो हानि रोक्नको लागि हो, जुन प्रणालीले कसरी काम गर्दछ। लेयर-बाय-लेयर प्रणालीको अवधारणा सरल छ: पातलो कपडाका तहहरू मोटा कपडाहरूको तहभन्दा तातो हुन्छन् किनकि त्यसले शरीरबाट उत्पन्न गर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा जालमा पार्दछ। तह-द्वारा-तह प्रणाली तीन तहहरूको मिलेर बनेको हुन्छ: एबासेलेयर, एक इन्सुलेशन लेयर र एक शेललेयर। सबै तीन तहहरू सास फेर्नुपर्दछ, चाँडै ओसिलो वाष्पीकरण गर्न अनुमति दिदै। तिनीहरू पनि चाँडै सुक्नु पर्छ।
कपडाको आधार तह छालाले उत्पादन गरेको ओसलाई शोषकमा राम्रो हुनुपर्दछ (यसलाई "पसीना" भनिन्छ), र ओसलाई समान रूपमा कपडाको सतहमा वितरण गर्नुहोस्, पानीलाई वाष्पीकरण गर्न वा कपडाबाट बाहिरी ठाउँमा जान अनुमति दिनुहोस्। तह कपडाका आधारभूत तहहरूलाई प्राय: "उच्च प्रदर्शन कपडा" भन्ने लेबल लगाइन्छ।
इन्सुलेशनको तहहरूमा प्रायः ऊन र पुलभरहरू समावेश हुन्छन्, जसले शरीरलाई न्यानो राख्न तातो हावामा फसाउँछ। धेरै चिसो अवस्थाहरूमा, ढीला र हल्का इन्सुलेशनका धेरै तहहरूले तपाईंलाई कपडाको बाक्लो टुक्रा भन्दा न्यानो राख्छ।
यद्यपि कपडाको बाहिरी तह सामान्यतया हल्का तौल, वायुप्रूफ र वाटरप्रूफ हुन्छ, पोशाकको यो लेयरले अझै पनि ओसिलो रहन सक्छ। यो कसरी काम गर्छ? कपडाको बाहिरी तहको सतहमा धेरै साना प्वालहरू छन्, जसबाट पसिना वाफ गर्न सकिन्छ। वर्षा र बतास प्वालहरू भित्र छिर्न सक्दैन, तर पसिनाले प्वालहरू प्वाल पार्दछ।
प्राकृतिक वा मानव निर्मित कपडा छनौट गर्नुहोस्
जब तपाईंसँग राम्रोसँग फिटिंग र आरामदायी टि-शर्ट, चंकी कपासको शर्ट, र डेनिम ओभरलहरू छन्, तर किन जिमकी हिइकिंग गियरमा स्प्लैश हुन्छ? हो, कपासको फाइदा भनेको यसको सास फेर्ने क्षमता हो, तर यसको नतिजा भनेको पसिनामा भिजाउन सजिलो छ, र यो सजिलै सुक्दैन, त्यसैले तपाई आफैंको पसिनाबाट चिसो लिन सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै प्रकारले, कपासको कपडाले वर्षालाई पूर्ण रूपले शोषण गर्दछ, भारी र ओसिलो हुन्छ। कपडाले मानव-निर्मित फाइबरहरूको पनि प्रयोग गर्दछ जसले केही पानी अवशोषित गर्दछ तर प्राकृतिक फाइबरहरू जस्तो नभई तिनीहरू सजिलै सुख्खा हुन्छन् र प्राय: जसो अवस्थामा धेरै मेहनत बिना सुख्खा लपेट्न सकिन्छ।
सामान्य बाहिरी खाना संरक्षण विधिहरू